Ny toro-làlana farany amin'ny Testosterone decanoate ho an'ny Bodybuilding
1. Inona ny testosterone decanoate? Ahoana no iasany?
Testosterone decanoate (5721-91-5) dia anisan'ireo steroïde ampiasaina indrindra eo amin'ny tsena atleta sy mpanao biriky. Ny famokarana zava-mahadomelina dia amidy noho ny anarana marika samihafa any amin'ny tsena isan-karazany, fa ny Neotest 250 dia miorina ho marika makotroka testosterone indrindra fantatra. Ity zava-mahadomelina ity dia novolavolaina ho toy ny zava-mahadomelina momba ny veterinera talohan'ny nahatsapana fa afaka manampy ny mpamboly hanatratra ny tanjon'izy ireo. Ny 250 Neotest dia novolavolaina ary nifanerasera tamin'ny ezika iray lehibe iray avy amin'ny decanoate testosterone. Raha ny marina, io fitambarana Estera io dia anisan'ireo lehibe indrindra eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, ary afaka mahazo izany ianao amin'ny maha-ampahany amin'ny fitambaran-tsambatra. Ny tsiranoka fanasan-tsakafo indostrialy dia ampiasaina ao anatin'ny ankamaroan'ny fitsaboana testosterone isan-karazany toy ny Omnadren sy Sustanon 250 mba hiresahana vitsivitsy. Androany, sarotra ho anao ny mahita ny Neotest 250 eny an-tsena.
Araka ny voalaza tetsy aloha, decanoate dia ezitera lava izay matetika mifandray amin'ny steroids isan-karazany anabolika mba ahafahan'izy ireo manome valiny tsara sy mijanona ao amin'ny rafitra vatanao mandritra ny fotoana maharitra. Testosterone decanoate (5721-91-5) dia steroide anabolika mipetrapetraka izay midika fa tsy maintsy hampiditra ny dosage ao anatin'ny fotoana fohy nataon'ilay dokotera ianao mandritra ny vanim-potoana manontolo. Ny Ester dia tsy manelingelina ny fahaiza-manao sy ny asan'ny testosterone, fa ny fahafahana miasa ihany no ahafahana manao zavatra mandritra ny fotoana maharitra. Ireo Ejipsiana lava dia mandika ny antsasaky ny fiainana an-taonany amin'ny testosterone ao amin'ny vatanao ary ny esters fohy dia midika fa ny fiainan'ny zava-mahadomelina dia hanana fiainana mavitrika fohy. Ny haingam-pandehan'ny testosterone decanoate dia navotsotra ao amin'ny vatanao dia manome antoka ny fitsaboana tsy tapaka sy miorina amin'ny hormone testosterone ary lasa mavitrika aorian'ny fampidirana iray monja.
Ny testosterone decanoate (5721-91-5) dia marika androgenic an'ny 100 / 100. Ireo tombana na ireo tahiry ireo dia ampiasaina amin'ny famakiana ny tanjaky ny steroid rehetra anabolika rehetra eny an-tsena. Ity steroid ity dia manana halaviran-dava efa ela sy matevina rehefa mivoaka ao amin'ny rafitra vatanao raha oharina amin'ny testosterone cypionate izay lazaina hanome valiny mitovy. Noho izany, ireo toetra ireo dia mahatonga an'i Neotest 250 ho vahaolana tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny testosterone. Ny ampahany tena tsara indrindra amin'ny fitsaboana testosterone dia nampidirina indray mandeha; Ny vatanao dia tsy afaka manavaka azy amin'ny fomba voajanahary izay midika fa ho tianao ny vokatra tsara amin'ny faran'ny vanim-potoanao.
Ny zava-mahadomelina dia miasa toy ny hormone testosterone voajanahary izay mampitombo ny toetran'ny lehilahy, toy ny fitomboan'ny volombava, ny fampitomboana ny feo ary ny fanorenana ny hozatra amin'ny hafa. Ny hormone testosterone koa dia tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ara-pananahana bebe kokoa amin'ny lehilahy ary dia atolotra ho an'ny marary izay manana dysfunction erectile na impotence. Na izany aza, ny hormone testosterone voajanahary dia mety tsy ampy mba hahafahan'ny atleta na bakteria mahazo ny tanjaka sy ny hozatra. Izany no antony mahatonga ireo atleta maro maniry handray steroid mba hanatsarana ny famokarana hormonina testosterone ao amin'ny vatana. Miaraka amin'ny fitsaboana testosterone dosage amin'ny fikarakarana sakafo sy ny fampiofanana dia mety ho mora aminao ny hahatratra ny tanjonao ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny fitsaboana testosterone indrindra (5721-91-5) miangona eny an-tsena dia novolavolaina mba hamaha ny olan'ny hormone testosterone ambany. Ny Omnadren tany am-boalohany dia manana Estera Caproate fa tsy ny dekanoate ester, fa ny fitomboana amin'izao fotoana izao dia misy testosterone decanoate ester taorian'ny fahatsapana fa mahomby kokoa ary mifangaro amin'ny ampemba 1ml. Izany dia mitondra ny dosage total ny fitambarana ho an'ny 250mg, ary ny fisarahana dia toy izao manaraka izao;
Ny zava-misy iray hafa mahaliana momba ny fanampiana Neotest dia ny fanatsarana ny fahaiza-manao, fa tsy toy ny decanoate testosteron voalohany izay natao indrindra indrindra hanampiana ireo marary manana olana amin'ny famokarana testosterone. Na izany aza, na dia tsy misy mpanamboatra fanta-daza aza no namorona ny Neotest 250, ny asany dia ny zavatra atolotry ny atleta sy ny mpandidy rehetra mba ho sariaka amin'ny asany. Ny fitsaboana testosterone decanoate dia fanampim-panazavana mahasoa izay manampy amin'ny fanatsarana ny famokarana ny sela amin'ny vatanao, hampitombo ny fihazonana azota ary hampivoatra ny proteinina.
Ho an'ny vokatra mitovy amin'izany dia azonao atao ny mametraka lahatsoratra Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana test
Tamin'ny voalohany, rehefa vita ny zava-mahadomelina tany Meksika dia nampiasaina ho an'ny tetik'ady ho an'ny veterinerina izy io, saingy ampiasain'ny olombelona ankehitriny ny fampifangaroana. Ny testosterone dia tena ilaina amin'ny tontolo ara-pahasalamana sy ara-panatanjahantena. Ny bodybuilders dia nampiasa ilay fitambarana nandritra ny taona maro, ary voaporofo fa tena tsara tokoa ny fanatsarana ny hozatra. Amin'izao fotoana izao, na eo aza ny fitsaboana tsy misy afa-tsy ao amin'ny laboratoara ambanin'ny tany, dia mbola manenjika ny fangatahana betsaka avy amin'ireo atleta ary koa ireo dokotera mba hitondra ny marary amin'ny olana samihafa testosterone.
Ny lehilahy indrindra dia mampiasa testosterone decanoate amin'ny prescription ho toy ny vahaolana amin'ny famokarana hormonina testosterone ambany. Amin'ny ankapobeny, ny fitambarana dia ampiasaina amin'ny fitsaboana fitsaboana testosterone mba hanampiana ny marary haka aina ary hiverina amin'ny fiainana mendrika. Ny tsy fahampian'ny hormone testosterone ao amin'ny vatana dia mety miteraka olana maro toy ny libido ambany, ny tsy fahampian-tsakafo na ny dysfunctement avo lenta, ary koa ny fanatsarana ny habetsaky ny fatin-doko izay napetraka eo amin'ny tratra sy ny andilany. Maro ny olana ara-pahasalamana misy eo amin'ny lehilahy izay miteraka avy amin'ny hormone testosterone ambany. Rehefa mijaly noho ny olana toy izany ianao, ny dokotera dia manoro foana ny fampiasana testosterone decanoate.
Etsy ankilany, ny testosterone decanoate dia ampiasaina ihany koa amin'ny fikarakarana aretina izay miteraka ny fihenan'ny masiratra toy ny VIH / SIDA. Ny marary dia mila manangana hozatra ary manatsara ny herin'ny vatany. Nandritra ny taona maro, ny dokotera dia nahomby tamin'ny fampiasana steroid anabolika mba hanampy ny marary mahazo sy hihazona ny hozany mandritra ny fitsaboana ny aretina voalohany. Na izany aza, raha manana an'io olana io ianao, dia aza mividy ny zava-mahadomelina na dia azonao atao aza ny mahazo azy alohan'ny fankatoavana na ny ordinatera avy amin'ny dokotera. Nitatitra ihany koa fa ny decanoate testosterone dia afaka manampy ny mpiserasera hanatsara ny fifantohan'izy ireo ary hamaha ny olan'ny tsy fahitan-tory. Na dia mampihena ny famokarana sela mena aza io steroide anabolika io, dia mbola tsy mazava tsara raha mety hanampy amin'ny fitsaboana ny anemia ny fanafody. Ny mpikaroka sasany dia manao fanadihadiana amin'izao fotoana izao mba hamaritana raha afaka manampy ny olona tsy matotra ny vondrona.
Ao amin'ny tontolo ara-panatanjahantena, ny testosterone decanoate (5721-91-5) dia nahitana vokatra tamin'ny fanampiana ny atleta sy ny bakteria hahatratra ny tanjon'izy ireo. Ny tsy fisian'ny tanjaka ampy ny vatan'ny olona dia ny antony mahatonga ny atleta maro tsy afaka ny hifaninana tsara na handresy ny fifaninanana. Na izany aza, ny testosterone decanoate dia natao ho fitahiana ho an'ny atleta maro be. Ho an'ireo mpiblaogy izay maniry ny hahazo ny hozatra sy ny hery hivoahana tsara, ity zava-mahadomelina ity dia izay ilainy. Rehefa voaaro araka ny tokony ho izy na miaraka amin'ny fihinanana sy fanofanana araka ny tokony ho izy, dia manome ny hatsaran'ny kalitao izy. Ny fitsaboana dia afaka manatsara ny fihazonana azota amin'ny hozatry ny hozatrao, izany dia fitaovana tena tsara ho an'ny fivoaran'ny kalitao tsara.
Ankoatr'izay, ny fitsaboana testosterone decanoate koa dia mampitombo ny famokarana andian-jiro mena, izay manome antoka fa misy hatrany ny sakafo mahavelona amin'ny hozatra. Amin'ny ankapobeny, rehefa miezaka mafy ianao mandritra ny fotoana lava indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra, dia mety handreroka na hikorontana ny hozatry ny hozatrao. Na izany aza, ny famatsiana ireo sakafo mahavelona dia miantoka fa ny vatan'ny vatan'ny olona dia manasitrana amin'ny fomba mahazatra ary ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Izany koa dia manampy amin'ny fivelaran'ny volombava sy ny fanatsarana ny tanjaka ara-batana. Raha efa ela ny tazanao na ny hozatry ny hozatra dia ampahafantaro ny dokotera amin'ny fotoana mahafinaritra. Ataovy azo antoka fa ny sakafo ara-pahasalamanao sy ny fampiofanana dia mahatsapa ihany koa fa mampiasa testosterone decanoate ianao na misy steroid hafa.
Ankehitriny, sarotra ny mahita izany testosterone decanoate dosage ho fanampim-panazavana tokana satria misy eo amin'ny mpamokatra fantatra eo an-tsena. Ny fitambaram-be dia hita matetika toy ny fofom-bolo na fifangaroana hafa mifandray amin'ny testosterone. Noho izany dia ho sarotra amin'ny dokotera ny mandefa ny testosterone decanoate irery raha tsy mampiasa fifandraisana hafa izay misy ny fanampiana ho ampahany amin'ireo zavatra entina. Ny fitadiavana ny 250 neotest ao amin'ny laboratoara ambanin'ny tany na tsena mainty dia mety ho sahirana mafy satria maro ireo laboratoaram-bolo no mahazatra ny zava-mahadomelina. Noho izany dia tsara ny mitady ny testosterone decanoate ho toy ny fofona amin'ny Sustanon na Omnadren. Etsy ankilany, azonao mora ny mahazo ny testosterone decanoate amin'ny aterineto avy amin'ny mpamokatra orinasa azo antoka na mpivarotra. Moa ve ny fikarohana ataonao mba hahatakatra ny fomba ampiasain'ny mpivarotra na ny mpanamboatra ny tsy handiso fanantenana.
Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fampahafantarana ny zava-mahadomelina dia azo antoka fa ny dosage dia manodidina ny 500mg isan-kerinandro bebe kokoa raha te hanatsara ny fahombiazanao amin'ny ankapobeny. Ny dosage ihany koa dia ampy ho an'ireo marary manana traikefa testosterone ambany. Raha ampiasaina amin'ny Neotest 250 ny vatanao, ny dokotera dia afaka manoro anao haka mihoatra ny dosages manomboka amin'ny 750mg ka hatramin'ny 100mg isan-kerinandro. Ny ankamaroan'ny mpampiasa malefaka 250 dia mitaky ny 500mg farafahakeliny isaky ny herinandro raha ny hafa dia miha-ambony noho izany; Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fandeferana ny vatanao. Na izany aza, ilaina ny mitsidika ny dokotera mba hanampy anao hametraka ny dosia mety aminao. Indraindray, ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia afaka miteraka dosage ambany ary mahatsapa fihenan-tsaka hafa izay mamporisika ny dokotera mba hampidina ny dosage lavitra.
Azo atao ihany koa ny mpampiasa sasany handray dosie avo kokoa ary mbola tsy mahatsapa ny vokatra tadiavina. Tsy mitovy ny vatan'olombelona, ​​ary noho izany dia zava-dehibe ny handehanana fitsaboana ara-pahasalamana mialoha sy aorian'ny famoahana testosterone decanoate. Misy ihany koa ireo mpampiasa hafa izay mahatsapa ny fiantraikany mahery vaika rehefa maka ny dosage avo indrindra 250. Tadiavo amin'ny dokotera nomena anao ny ordinatera ary araho ihany koa fa raisinao tsara ny injections. Raha tsy azonao antoka ny hametraka ny tenanao, dia lazao amin'ny dokoteranao ny hampiofana anao ny fomba fitsaboana ny zava-mahadomelina. Ny fitondram-pitsaboana tsy miankina dia mety hitarika fahasemporana ara-pahasalamana. Ny Neotest 250 koa dia mety ho safidy tsara ho an'ny atleta mijaly amin'ny fanesorana testosterone izay vokatry ny fampiasana steroid hafa anabolic. Eto ny dosage amin'ny 250mgs isaky ny andro 7 / 10 dia ho ampy hahazoana ireo hormones hiverina amin'ny làlana marina.
Ny fitsaboana testosterone decanoate dia mety ho mampalahelo, saingy tsy tokony ho olana izany satria azonao ny zavatra tianao hotratrarina amin'ny faran'ny vanim-potoana. Azonao atao ny manodina ny faritra misy tsiranoka mba hisorohana ny fanaintainany, fa ny dokotera ihany koa dia afaka manome anao fanafody sasany hanampy anao amin'ny fifehezana ny faritra fanasitranana. Na izany aza, dia mila manapoka ny tenanao ianao indray mandeha isan-kerinandro satria efa zava-mahadomelina efa ela. Izany dia hanome anao fotoana ampy hiatrehana alohan'ny handraisanao ny fitaovana manaraka. Raha mitohy ny fanaintainana, dia lazao avy hatrany ny dokotera. Mba hiarovana ihany koa, ataovy azo antoka fa mifikitra amin'ny torolàlana nomen'ny medikaly anao ianao ary miantoka ny handehananao fitsapana ara-pahasalamana mandritra ny androm-piainanao.
Ny dokotera no olona mety aminao hametraka dosage mety amin'ny fitsaboana testosterone ary miankina amin'ny zavatra tianao hotratrarina. Amin'ny toe-javatra maro, ny halaviran-dalan'ny isa dia avy amin'ny 8 ka hatramin'ny herinandro 12 na mihoatra. Ireo izay mampiasa ny zava-mahadomelina ho an'ny tanjona ara-pitsaboana dia mety hampiasa ny steroid ho an'ny kanseran'ny 8 hatramin'ny herinandro 10. Etsy ankilany kosa, ny atleta sy ny mpandatsa-bozaka izay mikendry ny hahazoana sombin-tsakafo amin'ny faran'ny vanim-potoana dia tsy maintsy mandeha amin'ny faran'ny herinandro faran'ny herinandro 12 ary indraindray ny dokotera dia afaka mampitombo ny tsingerina mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
Ny antony hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny halavan'ny vanin-tsolika toy ny testosterone miangona ampiasainao, ary ny anabolic hafa anabolika mandray anao amin'ny fotoana iray ihany. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny fantatra testosterone decanoate mpanamboatra dia fanamby hafa iray ihany koa ny fisian'ny mpampiasa maro satria tsy maintsy miantehitra amin'ny dokotera izy ireo amin'ny famerenan-kira sy ny dosage. Raha toa ka tsy mahatsapa ny vokatra tadiavinao ianao, dia ampahafantaro ny dokotanao mba hanitatra izany mandritra ny herinandro maromaro na hampitombo ny dosage. Na dia izany aza, voalaza fa ny fanafody bebe kokoa raisinao, ny avo kokoa ny mety ho vokatry ny vokatra hafa. Ny fahatratrarana ny tanjonao dia midika fa tsy maintsy manao fahafoizam-po ianao ary ny vokatryfon'ny fitsaboana testosterone decanoate dia mety ho mendri-piderana amin'ny fitadidiana ny vokatra tsara azonao hatao amin'ny faran'ny andro.
5.Ny valin'ny testosterone decanoate
Tahaka ny zava-mahadomelina hafa, ny fitsaboana testosterone decanoate dia manome vokatra tsara sy ratsy raha miankina amin'ny fomba fihetsika amin'ny vatana. Ny mpampiasa sasany dia faly noho ny fitomboan'ny atleta izay tena nahazo tombony amin'ny ankamaroan'ny steroide anabolic. Rehefa tsy mahavita miasa ho anao ny overdose na ny steroid anabolic, dia misy ny vintana ambony amin'ny fahatsapana fiantraikany mahery vaika izay horesahina any aoriana any amin'ity lahatsoratra ity. Tsy misy isalasalana fa ny fitsaboana testosterone decanoate dia fiasa mahery vaika izay hita matetika amin'ny testosterone samihafa.
Ny valin'ny testosterone decanoate?
Ity steroide anabolic ity dia nanaporofo ny vokatra tsara raha ampiasaina amin'ny tontolon'ny fitsaboana sy ny fanatanjahantena. Ireo mpampiasa dia mankafy ireto tombony manaraka ireto amin'ny faran'ny vanim-potoana;
Any amin'ny tontolo ara-pahasalamana
Ity vokatra ity dia manan-danja eo amin'ny ambaran'ny testosterone mpampiasa. Raha manana testosterone ambany ny mpampiasa, dia midika izany fa tsy ampy ny sela avy amin'io hormonina io. Ny fitsaboana testosterone ambany dia vokatry ny vokatra isan-karazany ary avy amin'ny soritr'aretina isan-karazany toy ny fahaverezan'ny firaisana ara-nofo, ny erectile dysfunction, ary ny fahaketrahana, ny fahaverezan'ny fifantohana mandritra ny fotoana fohy, ny tsy fahampian'ny torimaso, ny fihenam-bolana sy ny fahaverezan'ny herin'ny hery eo amin'ireo soritr'aretina hafa. Raha niaina ny soritr'aretina ianao, dia ny fahatsapanao fa ambany ny toetran'ny testosterone, zavatra azo tsaboina amin'ny fampiasana testosterone decanoate. Izany dia hampitombo ny level of testosterone mavitrika ary hanafoana ireo soritr'aretina voalaza etsy ambony.
Amin'ny famoahana ny Testosterone decanoate dia hanafoana ny mety ho voan'ny Alzheimer ianao, aretim-po, homamiadan'ny Prostate, ary osteoporose. Fanampiana tonga lafatra ny hanaisotra ny toe-javatra ary hamerina amin'ny laoniny ny vatanao. Dokotera maro no mandefa ny fampiasana testosterone decanoate ho an'ny marary hita amin'ny aretina. Io fitsaboana anabolika io dia fitahiana ho an'ny tontolo ara-pahasalamana hatramin'ny nahitana fa mety ho fanampiana goavana amin'ny fitsaboana ireo testosterone isan-karazany ambany.
Any amin'ny World Sporty
Ho an'ny atleta ara-panatanjahan-tena na mpandraharaha ara-boasary izay maniry hanatsara ny fahaizan'izy ireo, ity fanatanjahantena ity dia tena tsara ho an'ny atleta-vanim-potoana sy ny atleta mandritra ny fotoana. Ho an'ny fanombohana dia hanampy azy ireo amin'ny fampiroboroboana ny fihinam-bolo marefo, ary hitombo isan'andro izy ireo. Ny vokatra koa dia manampy amin'ny vatany amin'ny fahaverezana, izay tena tsara ho an'ireo atleta ivelan'ny fotoana satria manampy azy ireo hihazona ny vatany izy ireo ary tsy hiahiahy fa mety ho very ny hatavezina. Testosterone decanoate bodybuilding dia tena ilaina amin'ny famokarana sy famokarana haingana. Ny dokotera dia manosika ny fitehirizana ny azota izay mitazona ny hozatry ny hozatra amin'ny fikoropahana rehefa manapaka ny tavy be loatra. Rehefa mitombo be ianao raha mila ampidinina na hozatra kely, dia mampitombo ny fihenan'ny ratra ny fanafody.
Ny vokatra tsara indrindra azo antenaina taorian'ny fampiasana ny fanampiana dia ny fitsaboana tsara kokoa sy ny fizotrany. Izany dia amin'ny famelana ireo atleta hihinan-kanina nefa tsy mihena ny voany. Azon'izy ireo atao koa ny manafoana ny fatin'aretina noho ny metabolisma haingana. Ny steroid ihany koa dia mampitombo ny famokarana sela mena izay midika fa ny vatanao dia hahazoana sakafo mahavelona ho an'ny fitomboana mora sy ny fanamboarana voajanahary. Ny hormone testosterone avo indrindra ao amin'ny vatan'ny atleta dia tena ilaina tokoa amin'ny fahafahana azy hahatratra ny vokatra tadiavina.
Ny tsipika ambany dia ny fanaraha-maso ny Testosterone Decanoate dia miteraka fitomboan'ny testosterone. Ny valiny hita fa ny mpandidy rehetra na ny atleta rehetra dia tokony hiandrandra an'io steroid io dia ny fihenan'ny hery mamy, ny tanjaka ary ny fihenanam-bolo. Noho izany, tokony ho azo antoka fa ianao dia mifikitra amin'ny dosia mety, ny sakafo, ary ny fanatontosana ny vokatra tsara kokoa.
Ankoatra ny vokatra tsara, ny mpampiasa sasany dia mety hahatsapa ny vokatra hafa amin'ny voan'ny testosterone kely raha toa ka tsy ampiasaina ny vokatra na amin'ny tsy fisian'ny dosage. Na ireo mpampiasa manana toetry ny testosterone ambany, ny fahatsapana ny fiantraikany sy ny fahasarotana dia tsy fahita firy fa hosoloina mitovy ny level testosterone izay tokony nomanin'ny vatany. Amin'ny tranga maro, ny vokatra hafa dia vokatry ny fifehezana na ny fanafody raha tsy mandalo fitsaboana. Tsy ny olon-drehetra no afaka mampiasa ny testosterone decanoate satria ny toe-javatra sasany toy ny fo, ny fiakaran'ny tosidra eo amin'ny olana hafa dia tokony hanakana anao tsy hampiasa ny steroïde. Ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra testosterone decanoate effects ahitana;
Ny olana ara-pahasalamana
Famaritana ny famokarana testosterone natsangana endogenous
Fampivoarana ny lahy sy ny vavy
6.Testosterone decanoate ny antsasaky ny fiainana
Ity supplement ity dia manana ny antsasaky ny 8days. Midika izany fa aorian'ny fampiasana azy, dia tokony haka valo andro mialohan'ny sasak'izany dia hivoaka ny vatanao. Izany dia tombony hatramin'ny valo andro; Midika izany fa ampy ny fotoana hisian'ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana. Ny fiainana feno dia ho eo amin'ny 16 andro, izay midika fa ny mpampiasa dia mila miandry izany ela be izany mba hamerenana ny dosage feno. Noho izany, mila ampidirina ianao ao anatin'ny herinandro iray izay vaovao mahafaly satria izy ity dia zava-mahadomelina tsy azo ampiasaina. Alohan'ny hahatongavan'ny herinandro dia ho sitrana ny faritra fanasitranana, ary ho vonona amin'ny dosage manaraka ianao.
7.Testosterone decanoate tombony
Avy amin'ny vokatra, mazava ho azy fa miaraka ity vokatra ity Testosterone decanoate tombony ho an'ireo mpampiasa izay ahitana;
Manampy amin'ny fahavoazana
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ity tolotra ity dia noho ny fahafahany manampy amin'ny fahaverezan'ny vatana nefa tsy mahavery ny masiriry hozatra. Izany dia atao amin'ny fanatsarana ny fari-pahaizana momba ny metabolism ka manampy ireo mpampiasa mba hihena haingana kokoa. Ankoatra izany, dia tonga lafatra amin'ny fisotroan-drononony izany satria mahatsapa ny fahatsapan'ireo mpiserasera bebe kokoa. Ny antony iray mahatonga ny lanjan'ny vatana dia mihanaka sy mihinana rehefa tsy ilaina ny olana izay azo alaina amin'ny famoahana tombontsoa ho an'ny decanoate.
Mampiroborobo kokoa ny fanaovana firaisana ara-nofo
Ho an'ireo lehilahy izay manana olana ara-pahasalamana toy ny fahaverezan'ny firaisana ara-nofo na ny tsy fahampian-tsakafo mahomby, ity fanampiana ity dia nanaporofo ny fahagagana, ary ireo izay nampiasa azy io aloha dia nanamafy fa mety hamadika haingana ireo olana ireo izany.
Mampitombo ny fahombiazany izany
Ity fanampiana ity dia tena tsara amin'ny fampivoarana ny fahaiza-manao amin'ny atleta sy ny bandy. Izany dia manao izany amin'ny fampitomboana ny haavon'ny testosterone, izay tena ilaina amin'ny fanamafisana ny fiaretana na dia mandritra ny asa fanentanana aza.
Tsara ho an'ny fizotrany
Ny decanoate dia mety ho an'ny fizotrany. Izany dia satria mamela ny mpampiasa hamakivaky ny tsingerina izy ireo raha tsy mihena ny hozatry ny leo. Ny tanjon'ny atleta sy ny bakteria dia ny manapaka ny lanjany sy ny lanjany ho an'ny vatany raha mitazona tsara ny vatany, ary izany indrindra no azon'izy ireo amin'ny fampiasana ity steroid ity. Ny testosterone decanoate dia manandratra ny fihazonana azota izay manome antoka fa tsy very ny hozatra nahazo anao raha mbola eo am-pizakazaka.
8.Testosterone decanoate hevitra
Ireo izay nampiasa ity vokatra ity dia efa nanadihady azy io ho fanampim-pahazoana tombontsoa ary nanampy azy ireo hahita fiovana marobe amin'ny alalan'ireo cycles. Ny ankamaroan'izy ireo dia nilaza fa ny fanampiana dia nanampy azy ireo hiverina indray ny fahalianany ara-pananahana, zavatra iray niaretany nandritra ny fotoana lava. Ny hafa dia nilaza fa amin'ny alàlan'ny decanoate no nahavitan'izy ireo nandalo ny fotoam-pisakafoany sy ny fizotrany, zavatra iray izay tsy azon'izy ireo atao talohan'izay, tsy mahazo fakam-panahy hiverina amin'ny fahazaran-dratsiny ratsy. Ny ankamaroany dia ireo izay nankasitraka ity vokatra ity ho an'ny vokatra haingana ary ny hafiriana dia nijanona tao amin'ny vatana. Tian'ireo atleta ny fomba nanampiana azy ireo hanatsara ny asany any an-tsaha, ary tsy reraka be toy ny teo aloha.
Mpiserasera vitsivitsy no nitaraina tamin'ny vavany maina, akne, aretim-bolo marevaka, ary dysfunile erectile. Ireo izay nitaraina momba ireo fihary ireo dia niaiky fa nampiasa ny fampiasana zava-mahadomelina izy ireo ary ny hafa dia nampiasa ny zava-mahadomelina raha tsy nandalo fitsaboana.
9.Testosterone decanoate amidy
Na dia tsy amidy amidy eny an-tsena aza io zava-mahadomelina io dia afaka mividy Testosterone decanoate amin'ny aterineto ianao. Azonao atao koa ny mividy azy mivantana antsoina hoe Testosterone decanoate mba hivarotra raha azonao atao ny miditra amin'izy ireo, miresaha aminy mivantana ary miaraka amin'izany, dia matoky ianao fa hahazo ny kalitao Testosterone decanoate. Na izany aza, tokony marihinao fa noho ny fitomboan'ny fitakiana atleta maro sy mpanao biriky, dia nitombo ny mpivarotra. Ny sasany amin'izy ireo dia mpanadina ary manararaotra anao raha tsy mitandrina tsara ny mitady mpivarotra ara-dalàna.
Tokony hanao fikarohana momba ny fananana ity fanampiana ity ianao mba hahazoana antoka fa tsy miteraka imailaka ianao. Ao amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, ity famenoana ity dia sokajiana ho fanafody efa voafaritra, izay fehezina araka ny fanomezan-dàlana ilaina ary tokony tokony hitandrina koa ianao mba tsy hijanona amin'ny lafy ratsin'ny lalàna. Mety koa ianao buy Testosterone decanoate powder ary ataovy tsiratsiraka ny siramamy. Misy ny safidy ny mividy testosterone decanoate amin'ny ampahany na ampy fotsiny ho an'ny tsingerinao.
Alohan'ny fitokiana mpamatsy iray momba ny decanoate manokana, ataovy ny miverimberina amin'ny fanaovana safidy mba hahazoana antoka fa tsy hosoka izy ireo. Azonao atao ny manamarina ny fanadihadiana an-tserasera mba hijery izay lazain'ny mpanjifany teo aloha momba ny vokatrao na manontany ny namanao na ny havanao izay nampiasa ity vokatra ity alohan'ny hahafahan'izy ireo manoro ny mpivarotra tsara indrindra aminao. Mariho fa ny fividianana ity vokatra ity tsy misy ordinatera dia azo sokajiana ho fandikana ny lalàna ary mety ho any am-ponja ianao na mety hiatrika ny lamandy mahery.
Ny vokatra hafa Testosterone Cypionate koa dia malaza amin'ny fampiroboroboana bodyguilding, raha mila fanazavana bebe kokoa, azafady mijery lahatsoratra Testosterone Cypionate: Tokony ho Fantatry ny Bodybuilder rehetra
Ny vokatra azonao avy amin'ireto akora roa ireto dia mitovy amin'ny, fa ny testosterone decanoate dia aleony kokoa noho ny fahafahany manome vokatra haingana ary ny fahombiazany eo amin'ny famokarana sy ny famokarana dia. Tsara ho an'ny mpanao biriky izay mikasa ny hitazona zava-tsarobidy tsara tsy misy fihenjanana. Tiana ihany koa izy noho ny fiantraikany eo amin'ny lafiny hafa raha ampiasaina araka ny tokony ho izy. Na izany aza, ny roa tonta dia afaka manampy anao koa hahatratra ny tanjon'ny asa ho toy ny bodybuilder na atleta iray.
Sivacoumar, R., Vinoth, M., & Alex, ZC (2012). P1. 1.3 Tapered Fiber BioSensor ho an'ny Testosterone Detection. Tagungsband, 821-825.
Papa, HG, & Kanayama, G. (2012). Anabolic-androgenic steroids. In Fanararaotana sy fitsaboana amin'ny aretina ara-pahasalamana (p. 251-264). Springer, New York, NY.
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S. ... & Palmi, I. (2017). Hepatotoxicity mifandraika amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny steroids anabolic androgenic amin'ny doping. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Supplie), 7-16.
P Busardo, F., Frati, P., Di Sanzo, M., Napoletano, S., Pinchi, E., Zaami, S., & Fineschi, V. (2015). Ny fiantraikan'ny nandrolone decanoate eo amin'ny rafi-pitabatabem-bahoaka. Ny neuropharmacology ankehitriny, 13(1), 122-131.